जान्नुहोस् ! कुन राशिका प्रेमी प्रेमिकाको कस्तो हुन्छ स्वभाव
जनवरी 12, 2019 साइन्स इन्फोटेक	1 Comment प्रेमी प्रेमिका, राशि, स्वभाव
कुन राशिका प्रेमी प्रेमिकाको कस्तो हुन्छ स्वभाव ! ज्योतिषशास्त्रका अनुसार सबै १२ राशीका मानिसको स्वभाव अलग अलग हुन्छन् र यी राशीका कारण व्यक्तिका स्वभाव र भविश्य निर्धारण गरिन्छ । राशीको स्वभावका आधारमा हाम्रो सम्बन्ध, दोस्ती, प्रेम प्रसङ्ग पनि निर्भर हुन्छ । भनिन्छ जीवनमा कुनै न कुनै समयमा प्रेममा पर्छ मान्छे । प्रेम निजी विश्वासमा आधारित हुने कुरा हो । प्रेमबारे मानिसका धारणा फरक फरक हुन्छन् तर सबैलाई आफ्नो पार्टनरको विषयमा चिन्ता र चासो हुन्छ ।
हरेक मानिसको प्रेमिल स्वभाव फरक फरक हुन्छ । कसले तपाइँलाई मायाँ गर्छ र कस्ले धोका दिन्छ थाहा पाउन कठिन छ । तर ज्योतिष शास्त्र भने यस्तो कुरा राशि अनुसार फरक पर्ने दावी गर्छ । मान्छेको हरेक स्वभाव जस्तै प्रेम सम्बन्धी धारणा र ब्यवहार पनि राशि अनुसार फरक हुने ज्योतिष शास्त्रको भनाइ छ । यहाँ राशि अनुसार मानिसको प्रेम ब्यवहार कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गरिएको छ ।
मेष राशिका मानिस आकर्षक र प्रभावशाली स्वभावका हुन्छन् । यो राशिका पुरुष शाहसी हुन्छन् र केटीहरु छिटो आकर्षित हुन्छन् । मेष राशिका ब्यक्ति हतारमा प्रेम गर्छन् । कामुक स्वभावका हुने भएका कारण यिनीहरु हतारमा शारीरिक सम्बन्ध राख्न खोज्छन् । हतारमा प्रेम गर्ने हुँदा यिनीहरुको प्रेम विछोडमा टुङ्गिन्छ ।
मीन राशिका प्रेमी प्रेमिकाको स्वभाव माछाको जस्तो हुन्छ । यिनीहरु भावुक हुन्छन् र छिटो विपरित लिङ्गीप्रति आकर्षित हुन्छन् । प्रभाव पार्न सिपालु हुन्छन् तर यिनीहरुको प्रेम जीवनमा धेरै उतार चढाव आउँछ । बैबाहिक सम्बन्धमा गहिरो प्रेम हुन्छ ।
← सामाजिक अभियान – ‘नेपालमा भ्रष्टाचारीलाई फाँसी दिने कानून बनाउनुपर्छ’ भन्ने आवाजमा तपाईको धारणा के छ ?
इन्ट्रासेरिब्रल हेमोेरेज र यो हुने कारणहरु →
नोभेम्बर 22, 2018 नोभेम्बर 23, 2018 साइन्स इन्फोटेक 2
जनवरी 12, 2019 साइन्स इन्फोटेक 0
One thought on “कुन राशिका प्रेमी प्रेमिकाको कस्तो हुन्छ स्वभाव”
Pingback:जान्नु होस् ! यस्ता छन् लभ हर्मोन 'अक्सिटोसिन' बारे रोचक तथ्यहरु